Hitera-doza ny fanapatapahana lavareny ny Aterineto ao amin’ny fanjakana Rakhine any Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2020 17:53 GMT
Tamin'ny 21 Jona 2019, nanome baiko ny fanakanana ny aterineto amin'ireo kaominina miisa sivy any amin'ny Fanjakana Rakhine sy Chin any avaratr'i Myanmar ny manampahefana ao an-toerana. Enim-bolana taty aoriana, mbola nijanona ho tapaka ny aterineto tany amin'ireo kaominina miisa efatra any Rakhine : Mrauk U, Kyauktaw, Minbya ary Ponnagyun izay niteraka ohatra ratsy sy mahatonga fihetsiketsehana.
Navoaka ity baiko fanakanana ny aterineto ity tamin'ny volana Jona taorian'ny fifandonana teo amin'ny miaramila sy ny Tafika Arakan, vondrona mpikomy avy amin'ny foko Rakhine. Ahitana foko miisa zato mahery ao Myanmar ka mitolona mitam-piadiana ny sasany amin'izy ireo mba hanamafisan'izy ireo ny zony hizaka-tena.
Nilaza ny manampahefana fa ilaina ny miaro ny filaminam-pirenena amin'ny alàlan'ny famerana ny Aterineto. Na dia ny fidiran'ny mpanao gazety ao Rakhine , izay ahitana mponina telo tapitrisa mahery aza dia tena henjana ny fanaraha-mason'ny governemanta .
Nilaza ny tatitra fa nanakorontana ny asa aman-draharaha, ny fanatontosana ny asam-panjakana ampiasana aterineto na servisy e-governemanta ary ny fizahantany ny fanakatonana ny aterineto tao Rakhine. Nilaza ny mponina fa niatrika olana izy ireo tamin'ny tolotra fandefasana sy fandraisana vola amin'ny finday sy tamin'ny fifandraisana tamin'ireo havany izay miasa any amin'ny faritany sy firenena hafa.
Ny 21 Desambra, namoaka fanambarana iraisana ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena manameloka ny fampiatoana ny aternineto tao Rakhine. Namaritra izany ho iray amin'ny fanakatonana aterineto lava indrindra eto ambonin'ny tany izy ireo. Nolavin'izy ireo ny filazan'ny governemanta fa mila ferana ny aterineto ahafahana mamerina ny lalàna sy ny filaminana.
Tamin'ny 24 Desambra, manodidina ny 50 ireo mpikatroka no nanao fihetsiketsehana tao Yangon, afovoan-tanàndehiben'i Myanmar voalohany ary nitaky ny hamerenana ny fidirana amin'ny aterineto any amin'ny faritra rehetra ao Rakhine. Iray tamin'ireo nandray fitenenana tamin'ilay hetsi-panoherana i U Oo Hla Saw, mpikambana ao amin'ny Antenimiera ao Mrauk-U. Nizara tamin'ny Myanmar Times ny fomba fijeriny momba ny famerana ny aterineto izy:
Nampitandrina i Ma Yin Yadanar Thein, talen'ny FTMF Fahalalahana Miteny ao Myanmar fa azo ampiasaina ho maodely handrarana ny fidirana amin'ny aterineto any amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena ny fanakatonana aterineto ao Rakhine :